Shir dib u heshiisiin ah oo lagu soo gaba gabeeyey magaalada Jowhar - Jowhar somali news leader
Shir dib u heshiisiin ah oo lagu soo gaba gabeeyey magaalada Jowhar
Waxaa magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle lagu soo gaba gabeeyey shir gogol nabadeed ah oo lagu dhex dhexaadinayey beelo walaalo ah oo wada daga tuulooyinka Deymo Same iyo Maandheere oo hoosyimaada magaalada Jowhar.
Shirkan oo ay soo qaban qaabisay hay’adda Zamzam foundation ayaa waxaa ka soo qeyb galay ku simaha gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe, gudoomiye kuxigeenka mashaariicda gobolka,duqa degmada, gudoomiyaha degmada,taliyaha booliska, culimaa’u diin, duubabka dhaqanka, waxgarad, dhalinyaro iyo qeybaha kala duwan ee bulshada.
Ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah duubabka dhaqanka iyagoona beelaha ugu baaqay in ay dhaqan geliyaan qodobadii kasoo baxay heshiiskii ay wada gaareen.
Gudoomiyeyaasha tuulooyinka Deymo same iyo Maandheere Maxamed Ibraahin (Alla tuug) iyo Aweys Xasan Ibraahin oo goobta ka hadlay ayaa u mahad celiyey hay’adda Zamsam foundation, iyagoona sheegay inay is garab istaagi doonaan isla markaana ay ku dhaqmi doonaan qodobada wixii lagu heshiiyey.
Duqa degmada Jowhar Saalax Muudey iyo gudoomiyaha degmada Jowhar Cismaan Baarey ayaa u mahad celiyey dadkii gacanta ka geystay heshiiskan waxayna ku baaqeen in la meel mariyo qodobada heshiiska.
Ugu dambeyn gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka shabeellaha dhexe Maxamed cabdi sheekh Xaandow oo soo xiray shirka ayaa qiray in la oofiyey ballamihii horay loo galay wuxuuna ku baaqay in la ilaaliyo daris wanaaga isagoona kula dardaarmay beelaha inay gacmaha is qabsadaan.
Shirkan ayaa gunaanud u ahaa gogol nabadeed loo dhigay beelo walaalo ah oo muddo ku dhow soddon sano ay dirir ku dhex mareysay tuulooyinka Deymo Same iyo Maandheere ee gobolka Shabeellaha dhexe.
Uganda oo sheegtay in qof ismiidaamiyay uu ka dambeeyay qarax ka dhacay Kampala
Maraykanka oo ka fiirsanaya kaalmada ay siiyaan ciidamada DANAB